Android 12 inouya neyakakura kugadzirisazve kubvira Zvinhu Kushuva | Linux Vakapindwa muropa
Hazviratidzike senge zvakareba kudaro, asi anga ave makore manomwe kubva Google Yaziviswa Material Design. Panguva iyoyo, iyo kambani inovandudza inonyanyo shandiswa nharembozha yekushandisa pasirese yakaratidza nyowani interface uye nzira yekushandisa Android iyo yakapaza ne v4.x, uye ikozvino vava kuzoita zvakafanana danho. Iyo vhezheni ichaisuma ichave iri Android 12, uye zvakakodzera kutaura nezvazvo munzira akadonhedza zita rekuti zvihwitsi iro raishanda sezita rezita.
Google akapa Android 12 isingasviki maawa makumi maviri nemana apfuura paGoogle I / O. Semazuva ese, uye ichi chinhu chinoitwa nemamwe makambani seApple neIOS yavo beta yekutanga mwedzi isati yatanga iyo vhezheni vhezheni, pamwe nekuda kwe "hype", kuitira kuti vashandisi vade kuyedza iyo nyowani system, uye muchikamu chakakosha kuti vagadziri vawane nguva yekuyedza maapplication avo neshanduro inotevera yeiyo inoshanda system , pamwe nekugona kushanda pane dhizaini shanduko, majeti uye vamwe, kunyange Google yafambira mberi chikamu icho cheichi shanduko chichava otomatiki.
1 Android 12 inovandudza mashandiro, sekureva kweGoogle
2 Mutsva mufananidzo, majeti uye mhedzisiro
3 Inowanikwa mushure mezhizha
Android 12 inovandudza mashandiro, sekureva kweGoogle
Pakati pezvinhu zvitsva zvinosvika ne Android 12, Google inosimbisa:
Zvinyorwa Iwe. Google yasarudza iri zita reiyo nyowani nyowani, iyo inonyanya kukosha kugadzirisa kweiyo Android kusvika zvino.
Yakagadziriswa mashandiro, zvese zvehurongwa uye nezvezvishandiso. Ikozvino inoda shoma CPU nguva, 22% shoma, saka zvese zvichaenda nekukurumidza.
Performance Kirasi, seti yezvigadziriso zvinopfuura zvinodikanwa zveApple. Ivo vanoita izvi vaine Android ecosystem mupfungwa.
Kuvandudzwa kwehukama, nemabasa akaita seapp hibernation, mvumo yekutaurirana nemidziyo iri padyo (Bluetooth) kana mukuru kutonga nzvimbo.
Kubva pane zvataurwa pamusoro, ndinofunga chinhu chinonyanya kunakidza shanduko dhizaini, nekuti ndicho chinhu chekutanga chatinoona, chiri pachena. Vakaita shanduko yakadzama iyo inosanganisira mavara uye zvimiro, mwenje uye kufamba. Zvekushandisa Iwe unozowanikwa mune maapps kana achigadziriswa, saka vagadziri havafanirwe kuita chero chinhu, ivo vanodaro. Dhizaini nyowani yakatenderedzwa, izvo zvimwe zvinotevera maitiro ayo vamwe vanogadzira vakaita seMozilla vanoteverawo neFirefox yavo (89).
Mutsva mufananidzo, majeti uye mhedzisiro
ari Widgets, chimwe chinhu chakakurumbira zvekuti kunyangwe Apple yakasiya uye yatovabvumira pachiratidziro chemumba cheiyo iOS (kwete paiyo iPadOS), ivo vakashandurwa kuti vabatsire uye vataridzike. Iye zvino vanosanganisira mabhokisi ekutarisa, switch uye mamwe maitiro ekugadzirisa kuitira kuti tikwanise kusiya chinongedzo sezvatinoda.
Izvo zvaisave zviripo kusvika Android 12 ndiyo Tambanudza Overscroll, chii "itsva-system-wide scrolling athari yekuita kuti vashandisi vazive kuti vakapurura kupfuura kupera kwemukati inowanikwa mune yavo mushandisi interface. Iyo yakatambanudza mhedzisiro inopa yakasarudzika yakatwasuka uye yakatwasuka yekutsvaira yekumira chiratidzo iyo yakajairika kune ese maapplication, uye inogoneswa nekusarudzika yekutsikisa midziyo kudhara papuratifomu uye AndroidX.".
Google haina kumira kutaura chimwe chinhu chitsva chisingaonekwe, asi chinonzwika. Sezvo zve Android 12, odhiyo shanduko ichave inotsvedza, izvo hazvifanirwe kuita kana kusazoita kana uchiteerera kumumhanzi. Uye ndezvekuti vamwe vatambi vane sarudzo inoita kuti, pakupera kwerwiyo, kubuda kubuda kunoitwa, uye ndizvo zvichaitwa neAndroid 12: kana chishandiso chiri kutamba chiri kumira kuva pakati, odhiyo yacho inopera zvishoma nezvishoma, izvo zvinopa shanduko inotsvedza pakati pezvishandiso zvinotamba odhiyo uye zvinodzivirira imwe kubva pakutamba pamusoro peimwe.
Inowanikwa mushure mezhizha
Sezvatataura, isu tiri kutaura nezve yekutanga beta ye Android 12, saka haigone kuyedzwa zviri pamutemo izvozvi. Kuburitswa kweshanduro yakagadzika kunosvika mushure mezhizha, nezuva risati rasimbiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android 12 inouya neyakanyanya kugadzirisazve kubvira Chigadzirwa Dhizaini
Nezve misiyano uye zvakafanana. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 4